DAAWO: Puntland oo tababar u soo xirtay Ciidammo fara-badan oo ka howlgalaya Gobalka Cayn – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DAAWO: Puntland oo tababar u soo xirtay Ciidammo fara-badan oo ka howlgalaya Gobalka Cayn
May 11, 2022 Xuseen 14
Xukuumadda Puntland ayaa tababar u soo xirtay cutubyo kamid ah Ciidanka Daraawiishta Puntland, kuwaas oo muddo tababar uga socday dugsiga tababar Ciidanka Puntland ee Gen. Careys oo ku yaalla deegaanka Godod ee gobalka Mudug.
Ciidammada oo ka howlgalaya gobalka Cayn ayaa intii uu u socday tababarku, sidoo kale maray hanaanka tirakoobka iyo diiwaangelin Ciidanka Puntland.
Ciidan Cayn lagaynaa ma jidho ee meesha waxaan ka daawaday
Dhoola tus wasiirka maaliyada Puntland Hassan Shire Abgaal
oo Karaash bogiisa FC ku qoray inuu eryay!!!
Qoraalkii Karaash waxa laga soo qaaday; Habar ayaa haw haw lee
heelada inuu tuma!kkk
Hassan Shire Abgaal wuxuu ku hanjabay in Buuhoodle
Cashuur laga keeno, mar marsiiyo danbena aan la
aqbalayn. Fariin-tuna Karaash ayay ku socitaa!kkk
RERKII DHULBAHANTE WALI RARAYIHIIN
LAGA BILAABO ALLAH YARXAMO SAYID CABDULLAH XASAN ASKAR BEEY AHAYEEN ALLAH YARXAMO SIAD BARRE ASKAR BEEY AHAYEEN HATAA ALLAH YARXAMO CABDILAH YUDUF AYAGAA ASKARTI UBADNEEYD UKAXEYSTEY XAMAR HADA WALI WA ASKARTII LABA LAND EY KUDHAX NOLYIHIIN
GORMEEY KA KORAYAAN
Orgi dhaansade says:
Maansha alaah maanta waxaa inoo muuqday wax qabadkii iyo hormarkii puntland ee maamulka dani hogaaminayey ku soo gaba gabeeyey dhismihii ciidanka gobolkii ugu dambeeyey oo ah gobolka cayn ,
Halkaas waxaa ka cad in siciid dani uu puntland gaarsiiyey heer wanaagsan ninkii hadlayaa ha iska hadlo wax muuqda ayaan aragnaa guul iyo gobonimo puntland 💝👈
@Sitaha Saciid Dhahar,
Iintaasy ma aha mid Dhulbahantaha si gaar ah ugu dhamuuqan e waxaa lawadaaga inta badan beelaha Daarood. Haddii aad Warsangali dhab ah tahayna, adiga ayay nusqaan weyn iyo ceeb kugu tahay inaad Dhulbahantaha sidan ugu digato maadaama aad arrimo badan oo sooyaaleed ka arradantahay.
Guud ahaan Daaroodku, gaar ahaanna Hartigu, isticmaarkii hortii ayay qarniyo badan ahaayeen gob xadaarad fog oo facweyn leh. Hartiga oo keliya ayaa lahaan jiray labo saldanadood iyo labo boqortooyo. Gunnimadu waxay kuhabsatay markii suraabka Soomaaliya la unkay oo ay Hartigu kudhaceen qalad istraatiji ah ee ayan kasoo kabanin.
Qaladkaasu wuxuu ahaa inay xadaaraddoodii iyo mansabkoodii soojireenka ahaa iska zuuliyeen markii ay suraabkaas Soomaaliya qayb ka noqdeen. Waajibku wuxuu ahaa oo maantadanna weli yahay inay Hartigu gaaraan qaraarka ah in geyigooda dalka uguweyn ee uguna istraatijisan uu Soomaaliyada guud kamid ahaanayo, laakiinse uu kudhex yeelanayo maqaam iyo mansab gaar ah.
Waajibkaasu wuxuu ahaa oo welina yahay inay dib usoonooleeyaan oo caqdi dhaqameedna iskugu dhaftaan saldanadihii iyo boqortooyadii ay kucaanamaali jireen isticmaarkii hortii oo geyigoodana (Puntland) kayeeshaan Boqortooyo Jamhuuriyadda Soomaaliya mansabkaas kudhex leh oo cilaaqado gaar ahna lawadaaga boqortooyinka kale ee ay isir iyo asal wadaagta yihiin.
Mansabka noocan ah ayaa wuxuu Hartiga (iyo tolka kale ee degelka lawadaaga) ufurfuri lahaa fursado horumarineed oo qaalisan maadaama ay cilaaqaddooda boqortooyo usoojiidi lahayd maalgashi xooggan iyo maaliyad culus oo hiddanimada loogu sharfay.
Waxay noqon lahaayeen dad ladan oo aan Soomaaliya uga baahnayn shaqooyinka liita ee sida askarnimo iyo wax kasii hooseeya. Iintu taas weeye oo waana mid Hartiga dhammaantii maanta sixun ulahadhay. Haddii aan taladaydaas lasolinna, Puntland lafteeda masii jiri doonto.
Farah Mudug says:
Masha Allah,maanatay puntland draawishtii runta ahayd u staagtay, puntland is complete with sool snaag and cayn,thanks madaxwayne Dani.
marka hore,kalluumesto goormay noqdeen darwiish?
Marka labaad, Waa in aad ogaata in Dhulka iyo gobolada Warsangeli iyo Dhulbahante yahay Somaliland oo aanay cidina ku soo xadgudbi Karin.
manshaAllah. waa warkii kaliya ee qaymaha lahaa asbuucyadaan lasoo dhaafay. ninkii wax xasdaya ama wax xaqiraya isagey u taalaa…. lakiin waxaan qirayaa in Said Deni uu qabtay waxqabad wax ku ool ah.
waxaan Deni ku leeyahay “war ninyahaow hadii aad naga haajirtey waxaan kuu rajeyn kheyr…. hadii aad noosoo noqotidna waxaan kuu rajeyn kheyr”.
Hadii Deni uu si rasmi ah uga haajiro puntland waxaan Karaash siinayaa Taageero buuxda oo la mid ah tii aan siinayey Deni.
TOTTALLY 100% SUPPORT AS LONG AS HE DIFFENDS AND KEEPS PUNTLAND INTACK AND UNIFIED…. COS THAT IS WHAT MATTERS THE MOST.
Muuqaalka ciidanka ee soconaya ayaa fiirsaday
Puntland ma hubeyn karto boowe ciidankeeda,waana iska laafyoonayaan inyar oo qoryo loox ah oo Ak47 loo ekeysiiyay maahane kkkkkkkk
Hade boowe naftiina ha khiyaamaynina,hana hafrina jamhiiriyadda barakaysan kuma dayan kadhaane
Ciidanka QARANKA SOMALILAND oo beryahan u diyaar garoobaya i
xuska 18 May iska bareejeeya ayay is dhaheen
Xasan Shire wuxu isu diyaarinaya inu Deni bedelo,waana ku simaha madaxweynaha ee rasmiga ah.
Waar Cayn iyo sheekadaasi ina kala saari maysee maad dhulkayaga afka ka dhigtaan?
Buhoodle waa Somaliland.
Deni, Puntland wuu nacay, wuxuuna go’aansaday inuu Xamar ku noolaado. Noo sheeg Puntland muxuu u sameeyay?